Isistimu Yokusakaza Engagqwali
Isiyonke Isixazululo Sokwakheka Nokwenza Ngokwezifiso Komkhiqizo
Isixazululo sezinkinga ezivamile kwimishini yokukhipha i-ultrasonic
Imishini yokukhipha i-Ultrasonic iyisisekelo semithi yamaShayina ekhishwe, ngenxa yemisebenzi yayo eminingi, ukusebenza okuhle, ukwakheka okuhlangene, ukucubungula okuhle kakhulu, kusetshenziswe kabanzi kuzo zonke izigaba zokuphila ukukhishwa kwezidakamizwa eziyigugu nokuhlushwa. Namuhla, sizokwethula inkinga evamile ...
Idivayisi ye-Ultrasonic idizayini entsha kumkhakha we-slurry
Imishini ekhiqizwe yiHangzhou Precision Machinery Co, Ltd. yenzelwe ukuthuthuka kwenqubo yokukhiqiza izakhi ezinkulu. Ngoba ithangi likhulu kakhulu noma inqubo yamathangi ayikwazi ukwengeza ngqo imishini ye-ultrasonic ethangini, i-slurry ethangini elikhulu izohamba ...
Isingeniso ekwakhiweni nasekwenzeni i-ultrasonic disperser kanye nezindaba ezidinga ukunakwa zisetshenziswa
I-wave ye-Ultrasonic uhlobo lwamagagasi womshini omvuthwandaba wawo wokudlidliza uphakeme kunowomsindo womsindo. Ikhiqizwa ngokudlidliza kwe-transducer ngaphansi kwamandla e-voltage. It has izici imvamisa high, wavelength iDemo, ezincane diffraction mkhuba, di omuhle ikakhulukazi ...
Ukusetshenziswa kwemishini ye-ultrasonic emulsification
Ezimbonini ezahlukahlukene, inqubo yokukhiqiza ye-emulsion iyahluka kakhulu. Lokhu kwehluka kufaka izinto ezisetshenzisiwe (ingxube, kufaka phakathi izinto ezahlukahlukene kusixazululo), indlela ye-emulsification, nezimo ezengeziwe zokucubungula. Ama-emulsions ahlakazeka oketshezi ezimbili noma ngaphezulu ezingabonakali ....
Icala lenkambu lokusabalalisa kwe-alumina kwe-ultrasonic
Ukulungiswa nokusabalalisa kwe-alumina material kuthuthukisa ikhwalithi yento Ngaphansi kwesenzo se-ultrasound, ubukhulu obuhlobene bokusabalalisa okuyinhlanganisela buba buncane, ukusatshalaliswa kuba yunifomu, ukuxhumana phakathi kwe-matrix nokusabalalisa kuyanda, kanye ne-compatib ...
ngaphezu kwezikhathi ezingama-60 zokukhuphuka kokusebenza kahle usebenzisa i-ultrasound endaweni yokukhipha
Ukusetshenziswa okuyinhloko kobuchwepheshe be-ultrasonic emkhakheni wokulungiselela umuthi wendabuko wamaShayina yisizinda se-ultrasonic. Inani elikhulu lamacala lifakazela ukuthi ubuchwepheshe besizinda se-ultrasonic bungakhuphula ukusebenza kahle kwesizinda okungenani izikhathi ezingama-60 uma kuqhathaniswa nobuchwepheshe bendabuko. Fr ...
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic indlela enhle yokusabalalisa izinhlayiya ze-nano
Izinhlayiya ze-Nano zinosayizi omncane wezinhlayiyana, amandla aphezulu aphezulu, futhi zinokuthambekela kokuhlangana ngokuzenzekelayo. Ukuba khona kwe-agglomeration kuzothinta kakhulu izinzuzo zama-nano powders. Ngakho-ke, ukuthi ungakuthuthukisa kanjani ukusabalala nokuqina kwama-nano powders ku-liquid medium kungenisa kakhulu ...
Umkhiqizo wethu i-JH udlulise isicelo
I-Hangzhou Precision Machinery Co, Ltd. igxile emkhakheni wokwelashwa ketshezi we-ultrasonic iminyaka engaphezu kweyishumi. Kuze kube manje, imishini yethu ibisemikhakheni yokwelashwa kukawoyela we-CBD, ukulungiselela i-nano liposome, ukusabalalisa kwe-graphene, ukuhlakazeka kwesilayidi, ukusabalalisa kwe-alumina, ukukhishwa kwemithi yamaShayina ...
Kungani imishini yokukhipha i-ultrasonic ithandwa kangaka kubasebenzisi?
Imishini yokukhipha i-Ultrasonic inokusebenza okuphezulu kokukhipha, ukushisa okujwayelekile nokucindezela kwengcindezi, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, izinga eliphakeme lokuzenzekelayo, futhi inezici nezinzuzo izindlela ezivamile zokukhipha ezingeke zilingane. Ingasetshenziswa kabanzi ekwenziweni kwemithi, yena ...
Ukukhiqizwa kwemikhiqizo yokufaka yezimboni ye-ultrasonic kanye nokwakhiwa kwezixazululo kusebenza kakhulu futhi kudinga abasebenzi abakhethekile. I-Hangzhou Precision Machinery Co, Ltd. izinikele ekwakhiweni kwezicelo zezimboni ze-ultrasonic, ikakhulukazi emkhakheni wokusabalalisa. Ngaphambilini ...
Ubuchwepheshe be-Ultrasonic bunezinhlobo ezahlukahlukene zezicelo, inkampani yethu i-Hangzhou Precision Machinery Co, Ltd. i-forcus ku-sonochemistry ye-ultrasonic okubandakanya isizinda se-ultrasonic, ukusabalalisa, i-emulsification, i-homogenization, i-degassing njll Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-8 yokuqongelelwa kwedatha nenkinga kanjalo ...
imishini ye-ultrasonic iCanton Fair
I-2020 Canton Fair izobanjwa kusukela ngoJuni 15 kuya ku-24 isikhathi esiyizinsuku eziyi-10. Idokodo eliku-inthanethi lemishini yethu ye-ultrasonic lisendleleni nasekuhlelweni, futhi sizokwazisa ngesikhathi uma kunenqubekela phambili.